Wasiirkii hore ee difaaca Kenya, Yuusuf Xaaji oo geeriyooday |
Wasiirkii hore ee difaaca Kenya, Yuusuf Xaaji oo geeriyooday
Waxaa magaalada Naiorbi ee dalka Kenya ku geeriyooday Allaha u naxaiistee wasiirkii hore ee difaaca Kenya Maxamed Yuusuf Xaaji oo muddo dheer kamid ahaa siyaasiyiinta Soomalida ee dalka Kenya. wuxuu ahaa 80 jir.
Maxamed Yuusuf Xaaji oo ahaa senetarka ismaamulka Gaarisa, kana tirsanaa aqalka sare ee dalka Kenya ayaa waxaa geeridiisa BBC-da u xaqiijiyay xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo isna laga soo doorto magaalada Gaarissa.
Galabta ayaa lagu aasi doonaa qabuuraha Musliminta ee Langata, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisa.
Waxaa caruurtiisa ka mid ah Nuuradiin Yusuf Xaaji oo imika ah dacwad oogaha guud ee Kenya, kaas oo lagu garanayo in uu dacwado ku oogo siyaasiyiin caan ah oo qaarkood ay hayaan xilal sare oo lagu eedeeyay musuqmaasuq.